Sanatar Faroole oo ka digay iney Aqalka Sare iyo Xukuumaddu is-khilaafaan – Kalfadhi
Sanatar Cabdiraxmaan Faroole, oo hadda ka tirsan Golaha Aqalka Sare, ayaa ka digay iney Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Golaha Aqalka Sare is-khilaafaan. Waxa uu sheegay inuusan rajo ka qabin iney Aqalka Sare iyo Xukumaddu isqabtaan hadda, wuxuuse soojeediyey in laga taxadar arrinkaas. “Ma rajeeneyno inuu khilaaf soo dhex galo Aqalka Sare iyo Xukuumadda Dhexe ee halaga taxadaro” ayuu yuu Sanatarku yiri, waqti uu xalay ka jeedinayey hadal Munaasabaddii Caleema-saarka ee Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa.
Sanatar Faroole waxa uu Madaxweyne Farmaajo iyo Reysal Wasaare Kheyre u soojeediyey in xalka khilaafka ay ka bilaabaan Galmudug, oo uu sheegay iney labadooduba ka soojeedaan. “Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha, labaduba, waxay ka yimaadeen Galmudug, iyagaa xilku saaran yahay in ay arrintaas wax ka dhameeyaan” ayuu yiri Faroole. “Anigu diyaar baan u ahay inaan qeyb ka qaato- daris baan nahayee” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Isagoo muujinaya inuu diidan yahay khilaafka hadda Xukumadda Federaalka Soomaaliya kala dhexeeya Dowlad Goboleedyada, marar kala duwanna soo kala dhex galay Golaha Shacabka ayuu Sanatarku sheegay iney hadda wixii ka dambeeya DFS u dhaqaaqdo ka gaarista arrinkaas xal waara, taas oo ahayd talo ay soojeediyeen masuuliyiin kala duwan oo ka hadashay Munaasabadda uu Sanatarku ka qudbeeyey.
Sanatarku waxa uu sheegay in dhameynta khilaafka DFS iyo Dowlad Goboleedyada, oo uu isagu ahaa Guddoomiyaha Guddigii Aqalka Sare u xil-saaray arrinkaas, ay xalkiisa qoreen, hase ahaatee aan wali loo dhaqaaqin fulintiisa. Xukumadda iyo Maamulada Gobolada ayuu sheegay iney haystaan nuqulada xalka uu sheegay iney qoreen. Waxa uu xusay in loo baahan yahay tanaasul, isagoo yiri “tanasulkaa inaga maxaa noo diiday”?
Dhinaca Somaliland, waxa uu ku baaqay in dib loo furo wada-hadaladii ka dhexeeyey iyaga iyo DFS, taas oo uu sheegay in ay Dowladda Turkigu hadda u xil-saartay Safiirkeedii Soomaaliya u fadhin jiray, Olgan Bakar. “Hala furo Wada hadalkii Somaliland” ayuu si kooban u yiri Sanatar Faroole, waxa uuna xusay in sababaha dib u dhaca ku keenay iney wada-hadlaan DFS iyo Somaliland ay qeyb ka tahay dhul ay Puntland isku haystaan Somaliland, sida uu hadalka u dhigay. “Wax uun baa lagu hishiin doonaa” ayuu yiri Sanatarku.
Cabdiraxmaan Faroole, oo soo ahaa Madaxweynihii 3-aad ee Puntland, waxa uu carrabka ku dhuftay in ay Dowladaha Carabtu ku lug leeyihiin khilaafkaas uu ka hadlay raadinta xalkiisa. Waxa uu yiri “anagu, ma dooneyno dowladaha carabta ee aan waxba haysan, ee bukhalada ah oo aan waxba bixineyn”. Ajnabiga la sheego iney la kala saftaan madaxda iyo masuuliyiinta Soomaaliya ayuu ku yiri “dowladaha ajnabigaa waxaan ku leeyahay, inaga hana kala jiidaninee, waxaad tareysaan miiska soo saara, dadku ha wada arkeenee”.